DEG DEG: Madaxda Jubbaland iyo wafdi ka socda beesha Caalamka oo kulan uga socda madaxtooyada Kismaayo (Maxaa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Madaxda Jubbaland iyo wafdi ka socda beesha Caalamka oo kulan...
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa madaxtooyada Magaalada Kismaayo kulan muhiim ah uga socdaa Madaxda Maamulka Jubbaland iyo wafdi ka socda beesha caalamka, si loo soo afjaro kala qaybsanaantii ka dhalatay Doorashooyinka Jubbaland.
Wafdigan ayaa waxay marka hore Magaalada Kismaayo kula kulmeen siyaasiyiinta is bedeldoonka, waxayna u sheegeen in ay yihiin wafdi loo soo diray, sidii looga gudbi lahaa khilaafka hareereeyay Jubbaland.
Sidoo kale wafdigan ayaa intaasi ka dib waxay xalay gaareen Madaxtooyada Magaalada Kismaayo oo ay kula kulmeen masuuliyiin uu ugu sareeyo Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan.
Wararka ay haleyso Halqaran.com ayaa sheegaya, in markale ay Axadda maanta labada dhinac ku kulmi doonaan Madaxtooyada Kismaayo, si horey loogu sii amba qaado kulankoodii xalay.
Waa markii ugu horeysay oo la bilaabo dadaalo lagu doonayo in lagu soo geba-gabeeyo khilaafka Maamulka Jubbaland kala dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Khilaafka muuqdo ee u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland ayaa waxaa uu xoogeystay bishii August, ka dib markii doorasho natiijadeeda lagu murmay mar labaad lagu soo doortay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland.
Waxaa sidoo kale khilaafkan qayb ka ah muucaaradka Jubbaland oo qaadacay Doorashooyinkii Madaxtooyada iyo Baarlamaanka Jubbaland.
Ugu dambeyn, wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa horey ugu baaqday in doorasho ku celis ah la qabto, waxaase taasi si weyn uga hortimid Madaxtooyada Jubbaland.
khilaafka dowladda iyo Jubbaland
Kulan madaxtooyada Kismaayo